केरा खानेले छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/केरा खानेले छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै!
1पितृ सत्तात्मक देशमा छोराको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ धेरैले छोराकै चाहानाका कारण पारिवारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् । छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोगले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययनको नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्मने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ?
यसको लागि विद्वानहरुले ७ सय ४० जना गर्भवती महिलाहरुलाई सहभागी गराएर अध्ययन गरेका थिए । सहभागीहरु महिलाहरु मध्ये जसले धेरै क्यालोरीयुक्त खाना वा केरा खाएका थिए, उनीहरुको छोरा भएको थियो ।त्यसैगरी कम क्यालोरियुक्त खाना खाने र थोरै केरा खानेको भने छोरी भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार, केरामा पोटासियमको मात्र धेरै हुन्छ, जसले लिङ्गको लम्बाइ बढाउन समेत मद्धत गर्छ । तर, उनीहरुको अध्ययन अनुसार, केरा खाँदा छोरा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशत हुन्छ । त्यसैगरी गर्भवती हुँदा छाती बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको